I-AWS Injongo kunye neNzuzo
Ukukhawuleza ukukhula komsebenzi kunye nokufumana umsebenzi ophezulu ohlawulelwayo.
Uza kufumana ithuba elininzi lomsebenzi ukuze ufezekise injongo yakho.
Ukukhula okuphezulu kunamathuba emisebenzi kwizakhono eziphezulu ze-IT.
Gcwalisa i-qualification yakho kunye nobuchwepheshe bokugqithisa ubuchule bokukhula kwamanani emfuno.
Funda i-AWS kwaye Khokela ikamva.
Ukuphucula i-CV yakho yokungcola okungcono, Faka isicelo se-interviews ezilungileyo kunye eziphakamileyo.
Ukuqulunqwa kwi-AWS (IiNkonzo ze-Amazon Web) Iikholeji zoqeqesho ziquka iingcamango zobuchwepheshe zokwakha izakhiwo ze-AWS. Ikhosi ijolise ukufundisa izisombululo zokwakha izithuthi ngendlela yokusebenzisa ifu ye-AWS ngokusetyenziswa kweenkonzo ze-AWS. Abathathi-nxaxheba baya kufunda kwakhona iipatheni zoyilo eziphakanyisiweyo kunye ne-AWS efudumele iifayile eziphezulu zokuyila nokuphucula iisombululo ze-IT (Innovative Technology).
Landela i-AWS izakhiwo ezintle kunye nemigaqo ephakanyisiweyo yokwenza izigqibo zeziseko ze-IT.
Umcwangcisi isisombululo sesiseko seseko esinokuthenjwa, esinokufumaneka kakhulu kunye neenkonzo ezingenakulungiswa kwi-AWS.
Ukuzalisekisa iimpawu zokuqina kunye nokuguquguquka kwiziseko ze-IT usebenzisa iinkonzo ezilawulwa yi-AWS.
Ncitshiswe iindleko kunye nokuphucula ukusebenza ngokwenza isisombululo se-AWS esisekelwe kwisiseko sonyango esiphezulu.
Sebenzisa i-Framework Architected Framework ukuphucula i-IT yokwakha i-AWS
I-Aws Technical Essentials Training
AWS(Amazon WebIiNkonzo)Inkqubo yoBuchule boBuchuleIYO(Innovative Technology Solutions) ijolise ukuqonda abachaphazelekayo ngemveliso, iinkonzo kunye nezicwangciso eziqhelekileyoAmazon WebIinkonzo. Ikunika ngemimiselo yokuba ube nolwazi ngakumbi ekuboneni iinkonzo ze-Amazon Web Services ukwenzela ukuba wenze izigqibo ezinolwazi malunga nezixhobo ze-IT ezisekelwe kwiimfuno zezoshishino kunye nokuqalisa ukusebenza kwi-AWS.
Funda malunga neengcamango ezisisiseko zokupakisha kwidatha yedatha.
Ukuqonda iikhontrakthi kunye nesigama esilandelayo kwipulatifomu ye-AWS
Funda ukuhamba nokusebenzisa i-AWS Management Console.
Ubume kunye noLawulo lokuFikelela (IAM) & Ukuphunyezwa kweendlela zokukhusela ze-AWS.
Sebenzisa izibonelelo zesevisi, kubandakanywaI-Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), I-Amazon Elastic Block Store (i-EBS), i-Amazon VPC (i-Cloud Vertual Private Cloud), ukuCwangcisa ngokuZenzekelayo, ukuThengiswa kweMali yokuThengisa (ELB) kunye ne-Amazon S3
Uluhlu lwee-AWS zoQeqesho lweeKota
1 I-ARCHITECTING KUQEQESHO LOQEQESHO LWE-AWS Jonga Okuninzi
2 UKUQEQESHWA KWEZIKHONO ZEZEKHARITYHULAM
Iinjongo zeZimfuno ezifunayo
Amandla okhuseleko ngokubanzi ukuze anelise iimfuno zolwazi olukhuselekileyo.
Ulawulo olucebileyo, ukuphicothwa nokuvunywa kwezokukhuseleko olubanzi. kutheni sikhonza abakhwebile bethu abathengi?
Yakha izakhiwo ze-IT ze-hybrid ezandisa i-infrastructure yakho kwi-Cloud.